Generation 90 namanje bengidlala ezingomeni band edume. Mhlawumbe lena esiseduzane abantu, umculo, okuyinto ngesikhathi esisodwa wenza ukusaphazela omkhulu futhi wathandwa izinhliziyo izigidi. Naphezu ukuvela okusheshayo izithombe ezintsha, abantu ungakhohlwa izilwane bese sikhumbula ubumnandi kudala. Kungani ukuhlukanisa iqembu "Hands Up"?
Umlando nesenzakalo amaqembu legend
Sergei Zhukov futhi Aleksey Potehin wahlangana ngengozi ngo-1991 ngesikhathi isiteshi somsakazo, lapho ngamunye wasebenza. Banquma ukuthi isakaze itheyiphu ezingoma zakhe. Ngesikhathi igama band akazange ngisho bacabange kanjalo, yini noma cha umsebenzi kunoma ubani nesithakazelo. Into kuphela ukuthi kwenziwe - Isitika enamathiselwe ngamazwi athi "Lokhu umculo siyokulethela bese uphakamisa izandla zakho phezulu." DJ ukubeka eseyintsha ngesikhathi uhlelo ngakumemezela ukuthi zithako abasha "Hands Up" iqembu. Ngakho, igama ngokwayo kwaphuma siqine emhlabeni pop. Ingoma yokuqala kakhulu, "Umfanyana" basamukela umphakathi nge ukuzinikezela Amazing futhi abathandwa abaningi. Ngemva kwenye ingoma eshisa izikhotha "umfundi" qembu laqala babuka amadolobha, enika lenqwaba zamantombazane ithuba lokuphinde ngihlangane nabanye neqembu Yinhle. Ngo-1999, i-albhamu ithengiswe an amazing amakhophi ayizigidi ezingu-12 amakhophi. Zonke izingoma ngakho abalaleli weza sengqondo ukuthi ngokushesha baba hits. Kodwa abaningi namanje wadida kungani iqembu bahlukana, "Izandla phezulu."
Ubani okufanele asolwe?
Ngo-2006, kwanqunywa ukuba anqamule imisebenzi iqembu. Ngahlela enkulu yokuvalelisa ekhonsathini e Moscow, kodwa abaculi abakwazi ukuqoqa imali eyanele nenhlangano yakhe. Ngo-August 2006, nje lashabalala iqembu "Izandla phezulu." Isizathu sokuba wokugoqa ayicacisiwe abaculi, nakuba izingxoxo ezahlukene kodwa bevuma ukuthi wonke umuntu okuphila kwakhe kuye kwaba noshintsho kungavumelani umsebenzi oqhubekayo. Uma ucela ubani okufanele asolwe ukuwa iqembu "Hands Up", ungathola impendulo: "Cha".
Sergei Zhukov bashintshele ukuqhuba imiklamo emisha futhi umsebenzi wakhe solo, futhi u-Aleksey Potehin balithanda esikhiqiza. Zibandakanye ukuthuthukiswa ahlangene lokusungula kwaba abathanda. Ngaphezu kweminyaka emihlanu, abantu abasha kunomehluko ngaphezulu. Abafana bakhula wafuna ezinkulu, intsha kakhulu izilaleli abalaleli iningi ememeza. Kwanqunywa ukuthi engu-30 akusiyo sina. Kukhona umbono ukuthi phrojekthi nje isiphelile. Iqembu wayengasenazo udumo yayo yangaphambili leholele abaculi abasha entsha ancintisane okuyinto kwaba nzima ngaye.
Sergei Zhukov babuka nge repertoire leqembu "Hands Up", ekhuluma igama elifanayo
Lapho iqembu bahlukana, "Hands Up", abadlali bomculo ihlukaniswe bodwa zonke repertoire zanqwabelana. Sergei ke uye waloba kakade albhamu amabili uwedwa, futhi kusukela ngaleso sikhathi zaqala ukuhamba ezweni lonkana ne Street Jazz show-ballet, abake wabambisana "izandla". Wayefanele nezindlu ezigcwele futhi ukunika ithuba ugxumela ezidlule. Old hits repertoire uyazi konke kusukela komncane kuya ezinkulu. Kuze kube manje, Zhukov - Omunye abaculi abaningi babuka. He is oshadile futhi onezingane 4.
Bar "Hands Up"
Sergei Zhukov, parallel umsebenzi kuvula nge nemigoqo isihloko band edume. Ibhizinisi buyadlondlobala, endaweni ethokomele nge imvelo evulekile kakhulu emadolobheni amaningi. Le ndawo hhayi ukukhonza izithombe, futhi uthole ukuthi kungani iqembu bahlukana, "Izandla phezulu." Ngisho ukuvinjelwa egumbini ukulalela hits "Hands." Nakhu kufika ponostalgirovat, ukudla okumnandi futhi uhlangana nabangani, ukubona ukusebenza inkanyezi izivakashi.
Alekseya Potehina ukuphila ngemva kokuwa leqembu
Kolunye interview, umculi wavuma ukuthi nge Sergeem Zhukovym ayisekeli ubudlelwane. On umbuzo kungani iqembu bahlukana, "Hands Up," akawuthandi ukuphendula. Alex kanye uVladimir Luchnikov (gr. "Turbomoda" umculi t. "Izandla phezulu"), babuka nohlelo solo kwamadolobha amancane. Basuke bakhangwa ngobuqotho yayo, nangobuqotho, nakuba ungatholi imali enkulu. Yena okholwa ukuthi impumelelo izingoma provincialism zabo zemvelo lapho wonke umhlali edolobheni elincane uzithola. U-Aleksey Potehin uzibophezele esikhiqiza yokuthuthukisa amaphrojekti amatjha. Waphinde washada futhi nendodakazi.
Iziteshi zomsakazo (Saint-Petersburg): uhlu ulwazi mayelana ezinye zazo
Carl Maria von Weber - umqambi, umsunguli German zothando opera: Biography nemisebenzi
Richard Hammond - umethuli we Top Gear. Biography, umsebenzi
Umzila "Perm-Kirov". Ukusuka "ezindlebeni zethusi" kumathoyizi e-Dymkovo
Nezatyagivayuschiesya ashaya: engeyokuqala ihange
Isifo ugcunsula: imiphumela, Ihlahlubo nokwelashwa izici